फोक्सो सम्बन्धि समस्या भएकालाई माछा लाभदायक – Sanchar Patrika
फोक्सो सम्बन्धि समस्या भएकालाई माछा लाभदायक
August 22, 2020 182
प्रायः मानिस स्वाद लिन माछामासु खान्छन् । माछामासु स्वादलाई मात्र होइन स्वास्थ्यमा समेत निकै फायदाजक हुन्छ ।माछामासुमा उच्च पौष्टिकता हुन्छ । जसले स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउँछ । अझ माछामा पाइने पौष्टिक तत्व स्वास्थ्यका लागी धेरै उपयोगी हुन्छ । किन माछा खानु पर्छ त ?
१. माछामा पाइने ओमेगा–३ नामक बोसोयुक्त एसिडले मानव शरीरमा फाइदा पुर्याउँछ । ओमेगा–३ ले मस्तिष्क र आँखाको रेटिनाका स्नायु निर्माणमा मद्दत पुर्याउँछ । साथै तन्तु निर्माण, विकास र बृद्धिमा ओमेगा ३ एसिडको अनिवार्य रहन्छ ।आवश्यकता पर्छ
२. गर्भावस्थामा वा सुत्केरी अवस्थामा आमाले पर्याप्त माछा खाएमा बच्चाहरुको मष्तिक र स्नायु प्रणालीमा वृद्धि विकाशमा मद्दत पुर्याउँछ । जन्मनु अघि आमाको गर्भबाटै डिएचए प्राप्त गर्ने बच्चाले जन्मेपछि आमाको दूधबाट यो तत्व प्राप्त गर्दछन् । तर आमाको दूध नखाने वा बट्टा बन्द दूध खाने बच्चाहरुले यो पोषण पाउदैनन् । यसले बच्चाहरुको मस्तिष्क र दृश्यशक्ति कम हुने संभावना रहन्छ ।
४. एक अध्ययनमा मष्तिक बोधो भएका, सामान्य ब्यवहारिक कार्य गर्न नसक्ने र लेखपढ गर्न समस्या भएका (डिस्प्राक्सिया, डिस्लेक्सियाजस्ता रोगका)बच्चाहरुलाई नियमित माछाको तेल खुवाउँदा सकारात्मक असर पाइएको थियो ।
Prevयो हो कोरोना भाइरसको असली अनुहार, पत्ता लाग्ला ओखति
Nextफ्रान्सका राष्ट्रपतिले जर्मन चान्सलरलाई हात जोडेर नमस्कार गरेको भिडियो भाइरल !